Sidee ayay Ilaalinta Qarsoonnimada Boostada Apple (MPP) u saamaynaysaa suuqgeynta iimaylka? | Martech Zone
Sidee ayay Ilaalinta Qarsoonnimada Boostada Apple (MPP) u saamaynaysaa suuqgeynta iimaylka?
Talaado, Febraayo 15, 2022 Talaado, Febraayo 15, 2022 Greg Kimball
Markii dhawaan la sii daayay iOS15, Apple waxay siisay isticmaaleyaasheeda iimaylka ilaalinta Qarsoodiga Boostada (MPP), xaddidaya isticmaalka pixels-ka raadraaca si loo cabbiro dabeecadaha sida qiimaha furan, isticmaalka qalabka, iyo wakhtiga degganaanshaha. MPP sidoo kale waxay qarisaa ciwaannada IP-yada isticmaalaha, taasoo ka dhigaysa la socodka goobta mid aad u badan. Iyadoo soo bandhigida MPP ay u ekaan karto kacaan iyo xitaa xagjir ah qaar ka mid ah, bixiyeyaasha kale ee sanduuqa boostada (MBP-yada), sida Gmail iyo Yahoo, waxay isticmaalayeen habab la mid ah sanado badan.
Si loo fahmo MPP si fiican, waa muhiim inaad dib u qaaddo oo aad marka hore fahanto sida khibradda cabbiraadda sicirka suuqgeynta isu beddeli doonto.
Kaydinta sawirka macneheedu waxa weeye sawirada iimaylka ku jira (ay ku jiraan pixels raadraaca) waxaa laga soo dejiyay seerfarkii asalka ahaa waxaana lagu kaydiyaa serfarka MBP-ga. Gmail-ka, kaydintu waxay dhacdaa marka iimaylka la furo, taasoo u oggolaanaysa soo-diraha inuu aqoonsado marka falkani dhaco.
Halka qorshaha Apple uu kaga duwan yahay kuwa kale waa Goorma kaydinta sawirka ayaa dhacaysa.
Dhammaan macaamiisha u adeegsata macmiilka boostada Apple ee MPP waxay lahaan doonaan sawiradooda iimaylka la horgeeyay oo la kaydiyay marka iimaylka la keeno (macnaheedu waa dhammaan pixels raadraaca isla markaaba la soo dejiyo), taasoo keenaysa iimaylka inuu isdiiwaangeliyo sida furay xitaa haddii qaataha uusan jir ahaan u furin iimaylka. Yahoo waxay u shaqeysaa si la mid ah Apple. Isku soo wada duuboo, pixels ayaa hadda ka warbixinaya 100% iimaylka qiimaha furan oo aan sax ahayn.
Maxay tani muhiim u tahay? Ansaxnimada xogta ayaa muujineysa in Apple ay maamusho isticmaalka macaamiisha iimaylka qiyaastii 40%, markaa tani waxay shaki la'aan saameyn ku yeelan doontaa cabbirka suuqgeynta iimaylka. Tusaale ahaan, dhaqamada suuqgeyneed ee la aasaasay sida soo jeedinta ku saleysan goobta, automation-ka meertada nolosha iyo adeegsiga tignoolajiyada kala duwan ee soo jeedinta xaddidan sida saacadaha tirinta ayaa sii adkaan doona, haddii aysan u dhowaan suurtagal ahayn in si wax ku ool ah loo isticmaalo sababta oo ah heerarka furan maahan kuwo la isku halayn karo.
MPP waa horumar nasiib darro ah oo loogu talagalay suuqgeeyayaasha iimaylka ee masuulka ka ah kuwaas oo mar horeba ku dheggan dhaqamada ugu wanaagsan ee run ahaantii kor u qaadaya khibradaha macaamiisha. Qaado fikradda ah inaad awoodo inaad cabbirto ka-qaybgalka adigoo isticmaalaya qiime furan si aad hoos ugu dhigto macaamiisheeda aan firfircoonayn, iyo sidoo kale, si firfircoon uga bixi macaamiisheeda firfircoon. Dhaqannadan, marka si sax ah looga faa'iidaysto, ayaa ah darawallada muhiimka ah ee keenista wanaagsan, laakiin way sii adkaan doontaa in la hirgeliyo.
Daah-furka GDPR dhowr sano ka hor ayaa muujisay sababta ay warshaduhu u qaadanayaan suuqgeyn anshaxeed.
GDPR qaatay wax badan oo horeba loo tixgaliyay dhaqamada ugu wanagsan – ogolaansho adag, daah-furnaan weyn, iyo dookh/doorasho ballaadhan – oo ka dhigay shuruud. Inkasta oo qaar ka mid ah suuqgeynayaasha iimaylka ay u arkeen inay tahay madax-xanuun si ay u hoggaansamaan, waxay ugu dambeyntii keentay xog tayo fiican leh iyo xiriir adag oo calaamad / macaamiisha ah. Nasiib darro, dhammaan suuqgeynayaashu uma raacin GDPR sida ugu dhow ee ay ahayd ama waxay heleen daldaloolo sida oggolaanshaha duugista ee pixel-tracking siyaasadaha gaarka ah ee dheer. Jawaabtaasi waxay u badan tahay inay tahay sabab weyn oo MPP iyo dhaqamada la midka ah hadda la qaatay loo hubiyo suuqleydu waxay raacaan dhaqamada anshaxeed.
Ku dhawaaqista MPP ee Apple waa tallaabo kale oo loo qaaday sirta macaamiisha, rajadayduna waxay tahay inay dib u soo celin karto kalsoonida macaamiisha oo ay dib u xoojiso xidhiidhka summada/macmiilka. Nasiib wanaag, suuqgeeyayaal badan oo iimaylo ah ayaa bilaabay inay si fiican ula qabsadaan ka hor intaan MPP la bilaabin, iyaga oo aqoonsanaya khaladaadka cabbirada heerka furan, sida horay u soo-keenista, kaydinta sawirka tooska ah ee karti/naafonimo, tijaabada shaandhaynta iyo saxeexyada bot.
Marka sidee suuqleydu hore ugu socon karaan marka la eego MPP, haddii ay mar hore bilaabeen inay la qabsadaan mabaadi'da suuq-geynta anshaxa, ama haddii caqabadahani yihiin kuwo cusub?
Sida laga soo xigtay DMA warbixinta cilmi baarista Iimeyl Tracker Marketer 2021, kaliya rubuc ka mid ah soo-dilayaasha ayaa dhab ahaantii ku tiirsan heerarka furan si loo cabbiro waxqabadka, iyada oo la adeegsanayo gujisyada la isticmaalo laba jeer si ballaaran. Suuqgeeyayaashu waxay u baahan yihiin inay u beddelaan diiradda si ay u eegaan muuqaal dhammaystiran oo dhammaystiran ee waxqabadka ololaha, oo ay ku jiraan cabbirrada sida heerka meelaynta sanduuqa iyo calaamadaha sumcadda soo diraha. Xogtan, oo ay weheliso mitiro qoto dheer oo ku jira marinka beddelka sida qiimaha gujinta iyo heerka beddelka, waxay u oggolaanaysaa suuq-geynta inay si wax ku ool ah u cabbiraan waxqabadka ka baxsan furitaanka, oo ay yihiin cabbirro sax ah oo macno leh. Iyadoo suuqleydu ay u baahan karaan inay si adag uga shaqeeyaan si ay u fahmaan waxa dhiirigeliya macaamiishooda si ay uga qayb qaataan, MPP waxay ku dhiirigelin doontaa suuq-geynta emailka inay noqdaan kuwo si ula kac ah u leh helitaanka macaamiil cusub oo ay diiradda saaraan cabbirada sida dhabta ah u dhaqaajin doona ganacsigooda.
Intaa waxaa dheer, suuqgeynayaasha iimaylka waa inay eegaan kaydkooda hadda ee macaamiisha oo ay qiimeeyaan. Xiriiradoodu ma yihiin kuwo casri ah, sax ah oo ma bixiyaan qiimaha xariiqda hoose? Iyada oo xoogga la saarayo helitaanka macaamiil badan, suuqleydu waxay inta badan dayacaan wakhtiga loo baahan yahay si loo hubiyo in xiriirada ay hore u leeyihiin database-kooda ay yihiin kuwo la fulin karo oo faa'iido leh. Xogta xun waxay burburisaa sumcadda soo-diraha, waxay hor istaagtaa ka-qaybgalka iimaylka, waxayna si fudud u luminaysaa agabka qiimaha leh. Taas oo ah meesha ay qalabyadu jecel yihiin Everest - madal guusha iimaylka ah - soo gal natiijadu waxay ka soo kaban la'aan.
Marka xogta iyo tayada xidhiidhka la xaqiijiyo, suuqgeeyayaasha iimaylka 'fiirsashada' waa in ay u beddeshaa keenista wanaagsan iyo muuqaalka sanduuqyada macaamiisha. Waddada loo maro sanduuqa-gelis-ku waa ka adag yahay marka loo eego badi suuqgeynayaasha iimaylka ay u malaynayaan, laakiin Everest waxa kale oo ay ka qaadaa male-awaalka ka soo baxa keenista iimaylka iyada oo bixisa aragtiyo la fulin karo ololaha. Isticmaalaha Everest,
Bixintayadu way korodhay, waxaanan ku jirnaa meel wanaagsan oo aan meesha ka saari karno aan loo baahnayn diiwaanada wax badan ka hor habka. Meelaynta sanduuqa-sanduuqayagu aad bay u xoog badan tahay oo si joogto ah ayay u socotaa… si aan u sii najaxano waxaan qaadeynaa dhammaan tillaabooyinka waxaana isticmaaleynaa qalabka ugu fiican ee warshadaha si aan sidaas u sameyno.
Courtney Cope, Agaasimaha Hawlaha Xogta ee MeritB2B
Iyada oo la arki karo jaangooyooyinka suuq-geynta iimaylka iyo sumcadda soo-diraha, iyo sidoo kale ogaanshaha meelaha dhibka leh iyo bixinta tillaabooyin lagu xallinayo iyaga, noocyadan aaladaha ayaa qiimo u leh iimaylka suuqgeynta.
Marka la eego MPP iyo iftiiminta dib u soo cusboonaatay ee ku saabsan hababka ugu wanaagsan ee suuq-geynta, suuqgeynayaasha iimaylka waa in ay dib uga fikiraan cabbirada iyo xeeladaha si ay u guulaystaan. Iyada oo leh hab saddex-laab ah - dib-u-fikirka mitirka, qiimeynta tayada xogta iyo hubinta bixinta iyo muuqaalka - suuq-geynta emailka ayaa leh fursadda ugu wanaagsan ee lagu ilaalinayo xiriirka qiimaha leh ee macaamiishooda iyada oo aan loo eegin cusbooneysiinta cusub ee ka soo baxaya bixiyeyaasha waaweyn ee boostada.
Soo deji DMA's Email Tracker 2021 Warbixinta
Tags: tufaaxatufaaxa tufaaxamaxkamadey la qabsantayada xogta emailkagaarsiinta emaylkaEmail Marketingcabirrada emaylkasirta iimaylkasuuqgeyn anshaxeedweligiisbaGDPRGmailmacruufkaios15cinwaanka IPilaalinta qarsoodiga boostadabixiyaha sanduuqa boostadambpmeritb2bemaylka gacantamppraadinta pixelansax ahansax Everestyahoo
Greg waa madaxa caalamiga ah ee xalinta iimaylka ee ansaxnimada. Waa wax-abuure iyo wax-dhisay. Haddi uu mareegaha samaynayo, ama uu samaynayo shabakad bulsho, ama dhisme dabaq sare ah, hawshu waa isku mid; faahfaahinta waa ciyaarta. Waana uu jecel yahay ciyaarta.
Sellics Benchmarker: Sida loo Beenchmarking Account kaaga Amazon
Sida Kooxdaada Iibka iyo Suuqgeynta ay u joojin karaan wax ku biirinta Daalka dhijitaalka ah